प्रोफेसरको 'सरप्राइज क्लास टेस्ट' - जीवन किन अफ्ठ्यारो छ ? - उज्यालो पाटो
एकदिन प्रोफेसरले आफ्नो कक्षामा पस्ने बित्तिकै आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई आज सरप्राइज टेस्ट लिने बारेमा बताए । कक्षा कोठामा एकै पल्ट तनाव फैलियो । विद्यार्थीहरु नजिकका आफ्ना साथीहरुसँग मुखामुख गर्न थाले ।
त्यतिकैमा प्रोफेसरले हरेक विद्यार्थीलाई एउटा सेतो पाना बाड्दै हिड्न थाले । ज-जसले त्यो कागज हातमा पारे, ति झन् तनावमा र कौतुहल देखिए किनभने सेतो पानामा केहि पनि लेखिएको थिएन । जब प्रोफेसरले सबैलाई एक एक पाना सेतो कागज बाडिसकेँ तब कक्षाको अगाडी आएर भने, “तपाईहरुसँग अब १० मिनेटको समय छ । तपाईले मैले दिएको सेतो एक पाना कागजको बारेमा लेख्नुहोला । धेरै अफ्ठ्यारा र ठुला कुराहरु लेख्न पर्दैन, त्यो सेतो पानामा जे देख्नुहुन्छ, त्यसकै बारेमा लेख्नुहोला ।”
यति सुने पछि विद्यार्थीहरुले त्यहि सेतो पानामा लेख्न थाले ।
१० मिनेट समय बिते पछि प्रोफेसरले ति सेतो पाना उठाएर जम्मा पारे । र, सबैको अगाडी ति पानामा लेखिएका कुराहरु पढ्न थाले । लगभग सबै जसो विद्यार्थीले सेतो पानाको बिचमा भएको सानो कालो टिकोको बारेमा लेखेका थिए । कसै कसैले त पुरा पेज नै ध्यान लगाएर हेर्दा मात्र देखिने त्यो सानो कालो टिकोका बारेमा मात्रै लेखेका थिए ।
सबैको लेख पढिसके पछि प्रोफेसरले भन्न थाले, “सबै भन्दा पहिलो कुरा, तपाईहरुको यो टेस्टबाट तपाईहरु कसैलाई पनि म नम्बर दिने छैन । म त केवल तपाईहरुलाई केहि काम दिन चाहन्थेँ जसले तपाईहरुलाई केहि सोच्ने बनाओस् ।
लगभग सबैले नै आफ्नो लेखमा त्यो मसिनो कालो टिकोको बारेमा लेख्नु भयो तर कसैले पनि त्यो कागजको सेतो भागका बारेमा भने दुई हरफ पनि लेख्नु भएन । सबैको ध्यान केवल त्यहि कालो टिकोमा मात्रै गएछ । दुखको कुरा, हाम्रो जीन्दगीमा पनि सँधै यस्तै हुने गर्छ ।
हामी सबैसँग त्यहि सेतो पाना जस्तो जीवन हुन्छ, जसको हामी आनन्द लिन सक्छौ तर हामी त्यसको वास्ता नगरि केवल जीवनको त्यस्तै सानो कालो टिकोको बारेमा मात्रै सोचिरहन्छौँ । हामी सबैको जीवन समय र प्रकृतिले दिएको सबै भन्दा राम्रो उपहार हो जसमा साह्रै धेरै माया र करुणा भरिदिएको छ । हामीसँग खुसी हुने कयौँ कारणहरु छन् । संयोगले कसैसँग सबै राम्रा कुरा हुन्छन् र कसैसँग अलिकति थोरै । हामी कसैसँग केहि राम्रा साथीहरु होलान् । हामी कसैसँग राम्रो र मायालु परिवार होला । कसैसँग एउटा राम्रो जागिर होला । बस्नका लागि राम्रो घर र जीवनसाथी होला । हाम्रो दिनहरु अघिल्लो दिन भन्दा केहि न केहि फरक हुन्छ र केहि न केहि रमाइलो हरेक दिन हुन्छ ।
यति धेरै राम्रा कुराहरु हुँदाहुँदै पनि हाम्राे ध्यान चै जीवनको त्यहि कालो टिको तिर मात्रै जान्छ । कहिले स्वास्थ्यको समस्या कालो टिको भएर बस्छ । कहिले पैसाको कमि कालो टिको भएर बस्छ । कहिले सम्बन्धका समस्याहरु, कहिले साथीहरुसँगको मनमुटाव, कहिले परिक्षा त कहिले नोकरी र जागिरका समस्याहरु ।
यदि हामी जीवनमा देखिएको त्यो कालो टिकाबाट ध्यान हटाएर हेर्ने हो भने हाम्रो जीवनमा त्यो कालो टिको भन्दा सेतो भाग नै धेरै हुन्छ । हामी हरेकले भोगिरहेको जीवन लाखौँका लागि सपना जस्तो मात्रै हुन्छ होला । हामीले पाएको सफलता पाउँन लाखौँ मरिमेटेर लागेका होलान् तर त्यहि सानो कालो टिकोले हाम्रो दिमाग नै रित्तो बनाइदिएको हुन्छ ।
हामीले हाम्रो ध्यान कालो टिकोबाट उठाएर सेतो भागमा लगाउँनु पर्छ । जीवन यसै उज्यालो छ, यति भए जीवन झन् चम्किलो हुन्छ ।”
त्यसपछि प्रोफेसर चुपचाप कक्षाबाट निस्किए । विद्यार्थीहरुले निकै बेर शान्तसँग प्रोफेसर निस्किएको ढोका हेरिरहे ।
साथीहरु, सकारात्मकताले जीवनका दुखहरु जादुको छडी जस्तो गरेर हटाइदिदैन तर यसले हाम्रो जीवनलाई अर्थपुर्ण बनाइदिन्छ । सकारात्मकताले अँध्यारो नहटाउला तर यो अँध्यारो रात पछि बिहानी आउँछ भन्ने आशा देखाइरहन्छ । जीवन भनेको दुखै दुख र सुखै सुख मात्र होइन । दुख सुख नै त जीवन हो । त्यहि सुखदुखमा हामीले गर्ने व्यवहार नै त हाम्रो जीवन हो । सकारात्मक सोच्ने मान्छेहरु दुख पर्दा पनि आत्तिदैनन् र समाधानमा चाँडो पुग्छन् । अफ्ठ्याराहरु थप कसिला हुनु अगाडी नै खुकुलिन थाल्छन् ।
यसैले, सकारात्मक बनौँ र जीवनको उज्यालो पाटोमा ध्यान दिउँ ।
नोट : हिन्दी फेसबुक पेजबाट भावानुवाद गरिएको ।
तपाईलाई यो कथा कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । हाम्रो उज्यालो पाटोको फेसबुक पेज वा वेबसाइटमा तपाईले यस्ता थप कथा तथा लेखहरु पाउँन सक्नु हुनेछ ।
One thought on “प्रोफेसरको ‘सरप्राइज क्लास टेस्ट’ – जीवन किन अफ्ठ्यारो छ ?”
Jaya oli December 24, 2019 at 6:12 am · Edit
अति उत्तम लेख पढ्न पाइयो